သက်သတ်လွတ်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရား Sympathy | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » သက်သတ်လွတ်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရား Sympathy
သက်သတ်လွတ်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရား Sympathy
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Aug 22, 2010 in Drama, Essays.. | 27 comments
သက်သတ်လွတ်စားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ နဲနဲလောက် ဆက်ဖွပါရစေ။ မိမိအတွက်နဲ့ သူများကို ဒုက္ခမပေးရဘူးဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာတရားကနေ ဆင်းသက်လာတယ် ထင်ပါတယ်။ ဘယ်အကြောင်းကြောင်းနဲ့မှသူ့အသက်ကို မသတ်၊ မညှင်းဆဲရ ဆိုတဲ့ပညတ်ချက်ဟာ ရှေ့ဘဝ၊နောက်ဘဝ ရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ အရှေ့တိုင်းက ဘာသာတရားတွေမှာ အထင်အရှား ပြထားပါတယ်။ အနောက်တိုင်းကတော့တမျိုးပါ။ ဒီတော့ ဖန်ဆင်းရှင် ထာဝရဘုရား ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခံရမဲ့ နောက်ဘဝတခုပဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အနောက်တိုင်းကလူ့အဖွဲ့အစည်း နဲ့ အရှေ့တိုင်းကဘာသာတရားကို လက်ခံတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့ အဟိတ်တိရစ္ဆာန်တွေအပေါ် ထားတဲ့ သဘောထားတွေကို သဘောလောက် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား။ အနောက်တိုင်းရဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒအရ တိရစ္ဆာန်ဆိုတာ ဘုရားကလူတွေအတွက်၊ လောကအတွက် လုပ်ပေးထားလို့ ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို အောင့်မေ့ပြီးသတ်စားရင် အပြစ်လွတ်၏၊ ကုသိုလ်တောင်ရမည်ထင်ပါသည်။
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလူ့အဖွဲ့စည်းမှာတော့ သူတဖက်သားကို နာကြင်အောင်လုပ်ရင်တောင် ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲလုပ်လုပ် အပြစ်ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဟာတလိုင်းစီသပ်သပ်သွားတယ်လို့ လက်ခံလို့ပါ။ အရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကြေပါတယ်။ ကံကြီးမထိုက်ခဲ့ရင်ပေါ့လေ။ ဒီတော့ ငါတို့မြန်မာတွေက သနားဂရုဏာနဲ့ပိုပြီး ပြည့်စုံသယောင် ရှိပါတယ်။ ဘဝပေါင်းများစွာ သံသရာမှာ မတော်စပ်ခဲ့သူမရှိ၊ မဖြစ်ခဲ့တာမရှိလို့ ဆိုထားလေတော့ ဘာကြောင့် ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားရမလဲဆိုတာ လုပ်ခဲ့ရင်ငရဲခံရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အသိထက်ပိုကြပါတယ်။ လက်တွေ့ မှာကော တကယ်လိုက်နာကြရဲ့လား။ ကိုယ့်အသားလေးနဲနဲနာရင်တော့ အမယ်လေးတပြီး သူ့အသက်ကြတော့တဖြဲနဖြဲစားတာ သဘာဝတဲ့၊ ကံအတိုင်းပဲတဲ့။ ပြောမဲ့သာပြောတယ်၊ ကိုယ်တောင် သက်သတ်လွတ် စ မစားခင်လေးလောက်က ဝက်လေးမြေ မကျသားကို စားဖူးတယ်ရှိအောင်စားခဲ့ပါသေးတယ်။ လူတွေ စစ်ဖြစ်လို့ အသက်ဖက်နဲ့ထုတ်ပြေးရတာတောင် လမ်းမှာတွေ့ တဲ့၊ အတုတုပြေးတဲ့ တောကောင်တွေကို သူတို့လည်း ဒီအချိန်မှာငါတို့လိုသေမှာ ကြောက်နေကြတာပါပဲလားလို့ မတွေးဘဲ၊ ကော်တာပဲဆိုပြီး ဝိုင်းတွယ်ကြတာပဲ။ အများစုက ဪ အခုကာလပျက်ကြီ်းမှာ သူ့အသက်ကိုလည်းမသတ်၊ မညှင်းဆဲ၊ လုပ်ဖို့ကိုလည်း အားမပေးသင့်ဆိုပြီး ရေတိုစစ်ပြေးတုန်း ခဏတောင် မထိန်းချုပ်နိုင်ကြ။ ခေတ်ပျက်မှာတောင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ဆိုတာမဖြစ်ကြရင် သာမန်ခေတ်ကောင်းစဉ်မှာတော.. မပြောလိုတော့ပါ။
ထားလိုက်ပါတော့ ဒါသဘာဝ၊ ဘုရားတောင် တားလို့ရမှာ မဟုတ်ဆိုရင် သတ်ဖို့မွေးထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေအပေါ် ပြုမူပုံကို နဲနဲကြည့်လိုက်ရအောင်။ လူတွေအတွက် တိရစ္ဆာန်တွေကိုပြုလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်တဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လူသားစင်စစ်က တိရစ္ဆာန်တွေအပေါ် ညှင်းးဆဲရင်တောင် ဥပဒေအရ ထောင်ချလို့ရတယ်။ ချလည်းချခံကြရတယ်။ တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် အဖြူတွေက ရှေ့ဆုံးက။ သတ်တော့မဲ့ တိရစ္ဆာန်ကိုလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထားရတယ်။ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့် ကနေလဲ ကြည့်တာပါမှာပေါ့လေ၊ ဒါကြီးသက်သက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ သနားခြင်းဆိုတဲ့ လူသားဆန်မှု ကပိုပါတယ်။ သားသတ်ရုံတွေဆိုတာ အမြဲအစစ်ဆေးခံကြရတယ်။ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူသားဆန်မှု ရှုထောင့်ကပဲဖြစ်ဖြစ် မလုပ်ထိုက်ပေဘူးလား။
မြန်မာပြည်မှာရော ဒီလိုဥပဒေတွေ မရှိဘူးလား။ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ ရှေးရိုးစဉ်ဆက် ဆဲဆိုလာခဲ့ကြတဲ့ သွားလေသူ အင်္ဂလိပ်အစိုးရမင်းများ ထားခဲ့တဲ့ ဥပဒေတွေရှိပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ညှင်းပန်းမှု ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းဆိုတာလည်းရှိပါ့။ အရေးယူဆောင်ရွက်ရကောင်းမှန်း အသိမရှိခြင်းသာ ခက်တာပါ။ မွေးမြူရေးနဲ့ သားသတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေက တိရစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေနည်းလမ်းတွေမလိုက်နာ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေက လာဘ်ယူပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်လူ့အဖွဲ့အစည်းက အသိပညာပေးဖို့ ပျက်ကွက်၊ အံကိုကိုက်လို့။
မဟာရန်ကုန်မြို့တော် ဧရိယာအပြင်ဖက်ရောက်သွားရင် သတ်ဖို့ဝယ်လာတဲ့နွားတွေကို ထရပ်ကားအသေးလေးရဲ့ နောက်ခန်းဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာ အပြည့်ထည့်၊ နွားတွေရုန်းရင်းဆန်ခတ်မဖြစ်ရအောင် နောက်ဆုံးအဝမှာရှိတဲ့ အကောင်ရဲ့အမြီးကို ကားရဲ့အမိုးတိုင်မှာချည်ပြီး အရှေ့ကတိုးဝှေ့နေတဲ့ နွားနှစ်ကောင်၊သုံးကောင်ကို ပိတ်ခိုင်းထားပါတယ်။ ရက်စက်လိုက်ကြတာ။ တင်လာတဲ့ပိုင်ရှင်၊ အလုပ်သမားတွေက သူတို့ဘာသာ သာ အမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့၊ ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ တခါဒန်ပေါက်ဆိုင်က သတ်ဖို့ကြက်တွေထားတဲ့ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံးဝင်းထဲမှာလဲ ကြက်တွေကို ခြင်းထဲမှာ မဆံ့မပြဲထည့်ပြီး သိမ်းထား၊ တခါတလေလဲ လမ်းပေါ်မှာ ကြက်အရှင်တွေကို စက်ဘီးရဲ့ဘေးတဖက်တချက်မှာ အစုလိုက် ဇောက်ထိုးဆွဲ၊ တချို့ဆို ကတ္တရာလမ်းမပေါ်မှာ တရွတ်တိုက်ကြီး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူလို့ထင်နေတယ်၊ အတ္တတုံးတွေ။
မြန်မာတွေကြတော့ မနက်တိုင်း ပါဏာတိပါတာ ဝေဒါမဏိသိက္ခာပဒံ သမ္မာဒိယာမိလို့ အော်ဟစ်ခိုးပြီး ဈေးမှာအသား၊ငါးတွေဝယ်၊ မလတ်ရင် ချက်ခြင်းသတ်ဖို့ သွယ်ဝိုက်ပြီးပြော၊ ပြန်လာရင် ဘုန်ကြီးဆွမ်းနဲနဲလောင်းပြီး နိဗ္ဘာန်မရောက်ခင်စပ်ကြား လူမင်း၊နတ်မင်း၊ ဗြမ္မာမင်းဘဝ အသင်္ချေတောင်း၊ ပြီးရင်သီလလုံတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ်လိုက်နဲ့ ဟုတ်နေကြတာပဲ။ အလှူလုပ်တော့ ပရိတ်သတ်ရာဂဏန်းအတွက် အသားဆိုင်မှာ အော်ဒါသွားမှာ၊ငါးတန်းမှာ ကြိုပြောထား၊ ပြီးတော့ လာတဲ့ပရိတ်သတ်ကို ဘယ်လောက်ကုန်တယ်လို့ကြွားကြ။ ငါးလွှတ်ပွဲတွေလုပ်ဖို့ တံငါတွေကို ငါးပိုဖမ်းခိုင်း၊ ပြီးတော့ငါးအရှင်တွေကို တပျော်တပါးကြီး ပုံးတွေကန်တွေထဲထည့်ပြီး မြို့ပတ်လမ်းသလားကြ၊ အထဲကငါးတွေက အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လို့သေ၊ နေပူမိလို့သေကြ။ ဒါလား ယဉ်ကျေး၊ရိုးသားတဲ့ လူအဖွဲ့ အစည်း၊ ညကြရင်ဗုဒ္ဓသာသနာ လွှမ်းပတ်ကမ္ဘာတည်စေသော်လို့ အော်ပြီး ၃၁ဘုံသတ္တဝါတွေကို မေတ္တာပို့။ ဒီပုံနဲ့ ကမ္ဘာပတ်ပါလိမ့်မယ် အားကြီး၊ မြန်မာပြည်က ပျောက်မသွားရင် ကံကောင်း။
ပြောရင်းပြောရင်း ဒေါသတွေထွက်လာပြီနော၊ ဒေါသစိတ်ဆိုတာ ငရဲစိတ်တဲ့ သေရင် ငရဲခံရမယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ငရဲမရောက်ခင် အခုလမ်းခုလပ်ကနေ လှည့်ပြန်မှဖြစ်မယ်။ ပြန်လှည့်ကွေ့ဆရာရေ လူ့ပြည်ကို။
ဒီသတ်သတ်လွတ်အကြောင်းစာကို ဆက်ဖတ်ရတော့ မန်းလေးမြို့မှာရောရန်ကုန်မှာရော သားရေပိုက်ဆံအိတ်တွေ ဂျာကင်တွေ ဖိနပ်တွေကို အကြီးအကျယ်ကြော်ငြာလိုရောင်းနေတဲ့ဆိုင်တစ်ခုမှာ ကပ်ထားတဲ့ စာတန်းလေးကို ဖတ်ဘူးမြင်ဘူးပါသလား?
“တိရိစ္ဆာန်များကိုမစားခြင်းဖြင့် သနားကြင်နာပါ “လို့သဘောဆောင်တဲ့စာတန်းလေး တွေ့ရပါသဗျာ။
တိရစ္ဆာန်တွေကို သတ်ဖြတ် စားသောက်ကြတာကတော့ ကမ္ဘာဦးကနေ ကမ္ဘာပျက်တဲ့အထိ ရှိနေဦးမယ် ထင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စားလို့ အရသာရှိတာကိုး။
ဆရာကြီး ပီမိုးနင်း ပြောဘူးသလို တိရစ္ဆာန်တွေကို အသက်မပါတဲ့ နည်းနဲ့ ထုတ်လုပ် နိုင်ရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပေါ့။
အင်း …. ဒီနည်းကလည်း ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။
အခုတောင် အသားငါး ဈေးတွေက ခေါင်ခိုက် နေတာဆိုတော့ …..
ဒါပေမဲ့ တိရစ္ဆာန်ညှင်းဆဲမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
လူတွေကိုတောင်မှ ညှင်းဆဲဖို့ ဝန်မလေးကြတဲ့ လူတွေက တိရစ္ဆာန် ညှင်းဆဲမှုအတွက် အရေးတယူ ရှိကြပါ့မလား။
ဒုတိယ အကြိမ် ၀င်ပြီး ဝေဖန်စာရေးမိပြန်ပြီး ကိုကြောင်ကြီးရေ။ စာလေးကိုလည်း လေးစားမိသလို တချို့အချက်တွေဆို မသိတဲ့ အချက်ပါ နွားတွေ အမြီးကို ကားမှာ ချည်တာမျိုးကိုပေါ့။ သတ္တ၀ါတွေကို ဂရုဏာ ထားပြီးတော့ ကြင်နာစိတ်လေးမွေးတာ ကောင်းပါတယ် အဲဒီအချက်တွေ အားလုံးကိုတော့ ထောက်ခံပါတယ် ဘာသာရေး အရ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ သတ်သတ်လွတ်စားတာ ထေရ၀ါဒ မှာ တိုက်တွန်းထားတာ မရှိပါဘူး။ မဟာယနနဲ့ ဟိန္ဒူဝါဒ တွေကသာ တိရိစ္ဆာန်တွေ အသားမစားရတာပါ။ ခုနက ပြောတဲ့ အသတ်ကို သွယ်ဝိုက်သော နည်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း မသတ်ရန်တော့ အပြင်းအထန်တားမြစ်ထား တာကတော့ ထေရ၀ါဒပါ။ သတ္တ၀ါတွေကို ရင်ဝယ်သားပမာ ကြင်နာစိတ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ သူကို သတ်ရင် ကိုယ်လည်း ပြန်ခံရမယ်ဆိုတာ အသေအချာ ရှင်းလင်းပါခဲ့တာတော့ပါပါတယ်။ ရေးသမျှ အားလုံးကိုတော့ ထောက်ခံပါတယ် အားလုံးကို သတ်သတ်လွတ်ဝါဒ ဆန်ဆန် ဆွဲဆောင် ပြောသလိုမျိုးကိုတော့ လုံးဝ မထောက်ခံပါဘူး။ ဘာသာရေး ဆန်တဲ့ စာမျိုးရေးမယ်ဆိုရင် တတ်နိုင်သလောက် အစွန်းနှစ်ဖက် မရောက်တဲ့ စာမျိုးဆိုတော့ ပိုကောင်းမလားလို့ပါ။ တကယ်တော့ အသား ထက် အသီးအရွက်ကို စားတာပိုကောင်းပါတယ် လူတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေက လေ့လာကြည့်ရင် အသားစားတဲ့ ကျားတွေ ခြင်္သေ့တွေ လို အူတွေ တိုမနေပါဘူး အသီးအရွက်စားတဲ့ နွားတို့ ဆိတ်တို့လို အူတွေက ရှည်ပါတယ် သဘာဝက ကိုက အသားထက် အသီးအရွက်စားရင် အသက်ပိုရှည်စေတဲ့ သဘောဆောင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အသားထက် အသီးအရွက်ကို စားရတာ သဘောကျနှစ်သက်ပါတယ်။ သွားပုံစံတွေက အစ အသီးအရွက်တွေ ၀ါးနိုင်ဖြတ်နိုင်ဖို့ အံသွားတွေ ပါပါတယ် အစွယ်ဆိုတာကလည်း လူမှာပါတယ် သိပ်တိုပါတယ်။ အသားထက် အသီးအရွက်စားတာ ကောင်းပါတယ် သတ်သတ်လွတ်နဲ့ ဘာသာရေး မဆိုင်ကြောင်းလေး ပြောချင်ပါတယ်။ ပြောချင်စိတ်တွေ များသွားလို့ ရိုင်းတာပါရင်ခွင့်လွတ်ပါ။
အသားငါးအရှင်တွေကို လက်ညှိုးထိုးဝယ်ပြီးမှ သတ်ခိုင်းပြီး ချက်စားတတ်တဲ့ တရုတ်တွေကိုအလွန်စိတ်ပျက်မိတယ် …. ဈေးထဲမှာ အကုန်လုံး အရှင်တွေချည်းပဲရောင်းပါတယ် …. ၀က်သားအမဲသားဆိတ်သားက လွဲလို့ပေါ့ …
တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ တရုတ်တွေကဖိတ်လို့ ထမင်းစားသွားရတဲ့အခါ အလွန်စိတ်ညစ်ရတယ် … သူတို့က ငါးဟင်းမှာရင် ငါးအရှင်ကိုဖမ်းပြီး ယူလာပြရပါတယ် .. အကောင်အကြီးအသေးအလိုက် ဈေးနှုန်းကွာပါတယ် … ပုဇွန်ဆိုလဲ အရှင်ကိုချက်ခြင်းချက်ရင်တစ်ဈေး၊ အသေကိုချက်ရင်တစ်ဈေးပါ … ကျွန်မက ငါးရော ပုဇွန်ရောကြိုက်ပေမယ့် အဲဒီလို အရှင်ကို မြင်မိတော့ စားချင်စိတ်မရှိတော့ပါဘူး … ကြက်ကောင်လုံးချက်တဲ့ဟင်းကလဲ အရှင်ကိုချက်ခြင်းချက်တာလို့ပြောပါတယ် … ကျွေးတဲ့လူက သူတို့တရုတ်ဆိုင်ကဟင်းတွေ လတ်ဆတ်ကြောင်း အားရပါးရရှင်းပြလေ ကျွန်မက စားချင်စိတ် ကုန်ခမ်းလေပါပဲ …
သက်သတ်လွတ် နဲ့ ဘာသာေ၇းကို သတိထားပြီးစည်းခြားကြဘို့တော့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ မဟာယန နဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာတွေဟာ ဘာသာေ၇းကိုနွှယ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကမ္ဘာအဓိကဘာသာကြီးတွေ အဖြစ်၇ပ်တည်နေတာမှန်ပါတယ်။ ဒီအတွက်သူတို့မိ၇ိုးဖလာ၇ုံကြည်ကိုင်စွဲကျင့်သုံးခဲ့တဲ့သက်သတ်လွတ် အယူအဆကို ဒီဘာသာတွေမှာ ထဲ့သွင်းခဲ့ကြပုံ၇ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ ဟောတဲ့တ၇ားတွေဟာတကယ်တော့အကျင့်အကြံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘာအကျင့်အကြံလဲဆိုတော့ နိဗ္ဗာန်ေ၇ာက်ကြောင်းအကျင့်အကြံပါ။ သံသ၇ာမှာလည်စေကြောင်းအကျင့်အကြံမဟုတ်ပါ။ သက်သတ်လွတ်ကို နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုကြောင်း အဖြစ် ပြဆိုခဲ့တဲ့အချက်လုံးဝမတွေ့၇ပါ။ သက်သတ်လွတ်ဟာ ဗြဟ္မစို၇်တ၇ားဖြစ်တဲ့သက်၇ှိချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာတဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသိဥဏ်၇ှိတဲ့လူသူသားလို့ဆိုပါတယ်။ အဟိတ်တ၇ိစ္ဆာန် နဲ့အသိဥာဏ်၇ှိတဲ့ လူသားဒီနေ၇ာမှာကွာခြားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သုံးလေးဆယ်လောက်က သတ္တ၀ါဆိုတာလူချွတ်မှကျွတ်တာ ဆိုတဲ့ အယူဝါဒ နယ်တွေမှ (အထူးသဖြင့်) ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓကပြဆိုခဲ့တဲ့ဝါဒလိုလို ထင်ယောင်ထင်မှား လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်မှသံဃာတွေ သာမက အစိုး၇၇ဲ့ ၇ဲ့အာဏာစက်နဲ့၇ှင်းယူ၇ပါတယ်။
သက်သတ်လွတ်စားတာဟာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျုံနဲ့လုပ်တဲ့ ငါးတို့ ကြက်တို့ကို အသား အာ၇ုံပြုစားတာတွေကိုတော့ ကိလေသာ၇ှုဒေါင့်ကကြည့်ပြီးဘ၀င်မကျမိကြောင်း၇ိုးသားစွာထင်မြင်လိုက်ပါတယ်။
စိတ်ကိုလျှော့ ဒါယကာကြီး ကိုကိုကြောင်ကြီး
သူတို့ ပြုနေတာကို ကြည့်ပြီး ဒေါသချောင်းချောင်းထွက်နေရင်းတန်းလန်းကြီးနဲ့ ကြွသွားလို့ ကတော့
ပြုနေတာက သူ ဒေါသထွက်ပြီး လိုက်ပျက်စီးနေတာက ကိုယ်ဆိုတော့ ဆင်ခြင် ဆင်ခြင် ဒါယကာကြီး
မှား၏မှန်၏ ကောင်းသော ဉာဏ်ပညာဖြင့် အကြောင်းတရားတစ်ခုကို ခွဲခြားနိုင်စွမ်း မိမိမှာ ရှိတာဘဲဂလားနော
ကိုယ့်အမြစ် ကို ကိုယ်
( လောဘ/အလောဘ) (ဒေါသ/အဒေါသ) (မောဟ/အမောဟ)
ဒီဟိတ်ခြောက်ပါးကို အလျှင်ဆင်ခြင်လေ ဒါယကာတော်မြတ်။
စီးဖူ့ မှာ လက်ညှိုးထိုးစားတာ တရုပ်တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး
ဒါယကာမကြီး ဝေဝေရယ် လောကကြီးထဲက လူတော်တော်များများ လုပ်နေကြတာဘဲနော်
တစ်ယောက်သောသူမှာ သီလတစ်ခု တည်နေရင် ခက်ရခြည်ရဲ့ ။
စားချင်တဲ့သူစားရှောင်ချင်တဲ့သူရှောင် ကိုယ့်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်ကြပါ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံကြပါ
နဲနဲလေးပြောကြည့်မယ် … ကိုယ်ချင်းစာတတ်သူသာ သက်သတ်လွတ်စားနိုင်မယ်ထင်တယ် …
ဒါဆိုရင် ကျနော်လည်း နဲနဲထပ်ကွန့်ချင်တယ်။ ခံရဖူးသူများသာ ကိုယ်ချင်းစာရကောင်းမှန်း သိဖို့ပိုများပါတယ်။
ဂေါတမဗုဒ္ဓနဲ့.. သားတော်ရဟန်းတွေဟာ … တော်တော်ကိုယ်ချင်းမစာတတ်သူတွေပဲနော..။မခံရဘူးဖူးမှတ်တယ်..
ဒေ၀ဒတ်တောင်မှ ..ကိုယ်ချင်းစာပြီး သက်သတ်လွတ်စားဖို့ ဆော်သြောဖေါ်ရသေးတယ်..။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောခဲ့တာတော့ သတ်သတ်လွတ်စားရမယ်လို့မပါဘူးလားလို့……..သတ္တ၀ါတွေကိုမညှင်းဆဲရဘူး မသတ်ရဘူး ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိရမယ် မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေမလုပ်ရဘူး…….
အဲဒါ ဘုရားညီတော် ဒေ၀ဒတ်က ပြောခဲ့တာပါ။ ရဟန်းတွေမှာပါ သက်သတ်လွတ်စားဖုိ့ဝိနည်းပါပညက်ခိုင်းလို့.. ဘုရားက မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ .. သံဃာဂိုဏ်းတောင် ကွဲသွားခဲ့တယ်..။
သံဃာတော်တော်များများ .. ဒေ၀ဒတ်နောက်ပါသွားတာပေါ့..။
အဲဒီခေတ်က ..ဟိန္ဒူတွေဟာ ..သက်သတ်လွတ်စားကြတာများတာမို့ .. ဒေ၀ဒတ်က သက်သတ်လွတ် လုပ်စေချင်ခဲ့တာပေါ့..။
အခုထိ အိန္ဒိယမှာ သက်သတ်လွတ်သမားတွေ..။မီးလွတ်သမားတွေ သန်းချီရှိနေသေးတယ်..။
အဲဒီကနေ.. အမဲသားမစားရ ဆိုတာက .မြန်မာတွေမှာ အမြစ်လာတွယ်ပြီးပြီ။
အစ္စလမ်ဘာသာကနွယ်ပြီး .. ဗျဝိဗျသ..ပြီးတော့..နတ်..အဲဒီက… ၀က်သားမစားရ အမြစ်လာတွယ်နေတာ တော်တော်များပြီ။
အခုတော့.. အသားတောင် မစားရဖြစ်လာခဲ့ပြီ..။
အင်း.. ဘုရားပရိနိဗ်ဗန်ပြုပြီးအနှစ် ၂၅၀၀လည်းကျော်ရော .. ဒေ၀ဒတ်ဂိုဏ်းသားတွေ ..ပြန်ထလာတော့တာပါပဲ..။
ဂေါတမဗုဒ္ဓက ကိုယ်တော်တိုင်က.. ရဟန်းတော်တွေ … အသားစားတာကို ခွင့်ပြုထားပါတယ် ဆိုနေမှ .. ဘာတွေအတွန့်တက်နေချင်သေးသလည်းတော့ မသိ..။
ကြည့်ရတာ ..ရဟန်းတွေ ..သက်သတ်လွတ်စားမှ ..ဆွမ်းဖိုးသက်သာလို့ ..လုပ်နေကြသလားထင်ရတယ်..။
မြတ်စွာဘုရားက သံဃာတော်တွေ သက်သတ်လွတ်စားရမယ် ဆိုတဲ့ အရှင်ဒေ၀ဒတ်ရဲ့ အဆိုကို ပယ်ခဲ့တာ ဒါယကာတွေပေါ်မှာ ကယိကထ မများစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ၊ သက်သတ်လွတ်ပဲ အမြဲဘုဉ်းပေးတဲ့ ယောဆရာတော်ကြီးက ဘုန်းကြီး သက်သတ်လွတ်စားတာ သွားနာသက်သာအောင်လို့ပါ ဆိုပြီးမိန့်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊အဓိကထားရမှာ သက်သတ်လွတ်ဖြစ်စေ အသားဖြစ်စေ ရသတဏှာ မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ပြီး အမှတ်သတိနဲ့ စားရပါမယ်၊ခရီးခဲကို လွန်မြောက်ဖို့ သားရဲ့အသားကို စားရတဲ့ ဇနီးမောင်နှံလို သဘောထားရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊
အစာစားတိုင်း ဘုရားဟောသလို သတိရှိသူများ မန်းတဲ့အထဲမှာရှိရင် ပြောပါ၊ ကျနော်ဦးသုံးကြိမ် ချပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်စားတာ ကျနော်တို့မြန်မာတွေလုပ်နေကြ ရှင်ပြုနားသ၊ အသုဘ သရဏဂုံတင် သလိုပါပဲ။ ဘုရားကလုပ်ပါလို့ မပြောခဲ့ပေမဲ. ကောင်းတာလုပ်တာဆိုပြီး လုပ်ကြသလိုမျိုးပါ။ ဥပမာ ငါးပါးသီလသည် ဆောက်တည်ရမဲ့အရာ၊ တောင်းယူရမဲ့အရာမဟုတ်လို့ ဆင်ခြင်ကြည့်သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့တွေ ဘုရားရှိခိုးတိုင်း သရဏဂုံနဲ့ သီလကို တောင်းပါတယ်။ ဘာလို့ပါလဲ၊ ဆင်ခြေကတော့ မနက်ကယူထားတဲ့သီလ နွမ်းမှာစိုးလို့ ညဖက်မှာ တကြိမ်ပြန်ခံပါတယ်။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး သိပ်အငြင်းမပွားကြပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကောင်းတာလုပ်လို့ ဖြစ်ပါသည်။ သက်သတ်လွတ်လည်း ဒီလိုပါပဲ၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း မဟုတ်တဲ့ ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ ဓမ္မတာအလုပ် ကံအလုပ်များသာဖြစ်ပါသည်။ သံသရာမှာ ကိုယ်ကသူများ အသတ်အညှင်းဆဲ မခံလိုလျင် သူများကိုလည်း မသတ်မညှင်းဆဲနဲ့၊ ကိုယ်ကိုသတ် ညှင်းဆဲတာကို အားပေးအားမြောက်လုပ်မည့်သူများ မရှိစေလိုလျင် ကိုယ်လည်းသူများအသတ်ခံရ ညှင်းဆဲခံရမှာကို အားမပေးနဲ့။ အသားစားစား မစားစား တရားစစ်တရားမှန်တွေ့လျင် ကျွတ်တမ်းဝင်ရမည်သာဖြစ်ပြီး မတွေ့ခင်စပ်ကြားတွင် မိမိပြုခဲ့သောကံ၏ ကောင်းမွေဆိုးမွေကို ခံရမည်ဟုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း သက်သတ်လွတ်မစားခင်က ဒီလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ အခုစားတော့လည်း ဆယ်ယောက်မှာ ရှစ်ယောက်က ဒီလိုပဲပြောကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ ပညာပေးသလို၊ တချို့ကတော့ သွယ်ဝိုက်ရှုံ့ချသလို၊ တချို့ကတော့သနားသလိုလို အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်လည်း သူများအပေါ် အလားတူလုပ်ခဲ့လို ပြန်ခံရတယ်လိုပဲ အောက်မေ့ပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်စားတာ တနှစ်ပြည့်ခါနီးပါပြိ၊ အဲဒီအခါကြရင် သုံးသပ်ချက်ပို့စ်တခုတင်ပါမယ်။ အခုအချိန်ထိလည်း တနှစ်ထက်ပိုစားမယ်မစားမယ် မဆုံးဖြတ်ရသေးပါ။
ကိုကြောင်ကြီး သတ်သတ်လွတ်စားနိုင်တာကို ချီးကျူးပါတယ် … ကျွန်မကတော့ ၇ ရက်ထက်ပိုပြီး မစားနိုင်ဘူး … ကျွန်မအဖေက သတ်သတ်လွတ်စားတာ နှစ် ၄၀ ရှိပါပြီ .. ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော သူကတော့ စားမြဲစားလျက်ပဲ … လက်ငင်းအကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့တော့ အသက်အရွယ်ထက်ပိုပြီး နုနယ်တယ် … ကျန်းမာရေးကောင်းတယ် …. မေတ္တာစိတ်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရဲ့အကျိုးကြောင့် လူချစ်လူခင်များတယ် … တခြားအကျိုးတွေလဲ အများကြီးပါပဲ …
အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတွေကတော့ အသားလျှော့စားနိုင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ကလေးတွေကတော့ အာဟာရအရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ကလေးတွေ အတော်များများ ပိန်ညောင်နေတာပဲ။ သတ်သတ်လွတ်စားဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်ဘူး။ ဒီတော့ အသားကို အရင်က ၃တုံးစားရင် အခု ၁တုံးစားတာမျိုး၊ အရင်က တစ်ရက် ၄၀သားဝယ်ရင် အခု ၁၅ကျပ်သားလောက် ၀ယ်တာမျိုး ကောင်းပါ တယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အသားလျှော့စားနေပါတယ်။ သတ်သတ် တော့ မလွတ်နိုင်သေးဘူး။ ပြီးတော့ ဘုရားရှိခိုးရင် ငါးပါးသီလ ဘယ်တော့မှ မခံဘူး။ တစ်မှုကနေ နှစ်မှုဖြစ်မှာစိုးလို့။
ကိုကြောင်ကြီးပြောတာ အပြည့်ဝထောက်ခံပါတယ် .. အဲ့ဒီလို သတ္တ၀ါလေးတွေကို သေရမဲ့အတူတူ ဖြစ်သလိုပဲထားတဲ့သဘောကတော့ မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော် ….။ မြင်ရတဲ့လူလည်း စိတ်မချမ်းသာပါဘူး …။ ဘုရားက သတ်သတ်လွတ်စားရမယ်လို့မဟောခဲ့ပေမဲ့ သူများအသတ်သတ်ခြင်းကိုတော့ တားမြစ်ထားပါတယ် …။
ရန်ကုန်မှာလည်း ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်( ကိုယ်သိတာက တစ်ဆိုင်ကိုး) အရှင်တွေကိုစားမယ်ဆိုမှ သတ်ကျွေးတဲ့ဆိုင်ရှိတယ် ကေ ပါရာဒိုက်ဇ်တဲ့ ။
kai ပြောခဲ့တာ …
သတ်သတ်လွတ်စားဘို့ဆိုတာ ဘုရားညီတော် ဒေ၀ဒတ်က ပြောခဲ့တာပါ။ ရဟန်းတွေမှာပါ သက်သတ်လွတ်စားဖုိ့ဝိနည်းပါပညာတ်ခိုင်းလို့.. ဘုရားက မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ .. သံဃာဂိုဏ်းတောင် ကွဲသွားခဲ့တယ်..။
ဆိုတာ ဖြစ်စဉ်အမှန်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ဘာကြောင့် ၀ိုင်းပြီး ကန့်ကွက်မဲပေးကြတယ် မသိပါ။
အဲဒီတုန်းက ဒေ၀ဒတ်ဟအပြိုင် တစင်ထောင်ဖို့ ကြံစည်ခဲ့တာပါ။
သတ်သတ်လွတ်စားနေသူတွေကို ဒေ၀ဒတ်လမ်းစဉ်ပါလို့ မပြောရက်တာကလွဲလို့ …
(စိတ်ထားတတ်ရင် မြတ်ပါသည်လို့သာ အားပေးချင်ပါတယ်။)
အယူမသည်းကြဘို့ အစွန်းမရောက်ကြဘို့ အလည်အလတ်ကျင့်စဉ်ဆိုတာ ဆိုတာ တို့ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမ မဟုတ်ပေဘူးလားကွယ်ရို့။
ကန်.ကွက်ခြင်းမဟုတ်ပါ ။ သက်သတ်စားခြင်းအပေါ် ကိုယ့်အယူအဆကို လွတ်လပ်စွာတင်ပြနေခြင်းသာဖြစ်ပါသည် ။ မြတ်စွာဘုရားနှင့်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ကြံကြကုန်သောသံဃာတော်အရှင်
သူမြတ်များဟာ (အယောင်ဆောင်များမပါပါ ။) ဆွမ်းဘုဉ်းနေစဉ် ကြက်သား ၊ ၀က်သား ၊ ငါး ၊ ပုဇွန် ၊ ကန်စွန်းရွက် ၊ ချဉ်ပေါင် စသဖြင့် အရသာခံဘုဉ်းပေးခြင်းမဟုတ်ပါ ။
ဖြစ်ပျက်ဆင်ခြင်ပြီး ဥာဏ်သတိနှင့် ဘုဉ်းပေးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည် ။ ဘာဟင်းနှင့်ဆွမ်းလောင်းလောင်း ဘုရားက ဘာမှပြောမည်မဟုတ်ပါ ။
ဒေ၀ဒတ်လမ်းစဉ်ပါလို့ ပြောခြင်းသည် အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူသာဖြစ်လိမ့်မည် ။ လူဆိုးတစ်ဦးထံမှမကောင်းသည်.အရာများကိုပယ်ပြီ်းကောင်းသည်.အရာကို ယူတတ်လျှင်ကိုယ်နှင့်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးရှိပါမည် ။ သာမည ဆရာတော်ကြီး ဟာထင်ရှားသည့် သက်သတ်လွတ်စားဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပါ ။ ဒေ၀ဒတ်လမ်းစဉ် လိုက်သူမဟုတ်ပါ ။ မေတ္တာတရားနှင့်ကိုယ်ချင်းစာတရားပွားများစေရန်သက်သတ်လွတ်စားခြင်း
သက်သတ်လွတ်စားစား၊မစားစား ကံ၊ကံအကျိုးကိုလူတိုင်းခံစားရမည်သာ ….
စံရတနာ မှန်ဧ။် ။ 100% ထောက်ခံလိုက်သည်
ရာနှုန်းပြည့်ထောက်ခံပါတယ်။ သတ္တဝါအားလုံးဟာ ကံကံရဲ့အကျိုးကို ခံစားရမယ့်သူတွေပါ။ ကိုယ်က လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ နေတယ်ဆိုရင် တစ်ခါတစ်လေ လွန်ဆန်လို့မကောင်းတာတွေရှိပါတယ်။ အသားမစားတာဟာ သူ့အသတ်ကိုမသတ်ခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်တာမို့လို့ ရှောင်နိုင်တာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ဥပမာ-သူများဧည့်ခံတာကို စားမိချိန် တွေမှာ ကိုယ်က မစားရင် ဆက်ဆံရေးမှာ အခက်အခဲတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ကွဲပြားတဲ့ အယူအဆရှိသူကြားတွေမှာပါ။ စားကိုစားရမယ့် အချိန်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ စားပစ်လိုက်ပါတယ်။ နွားသားရယ်၊ ကြက်သားရယ် မတွက်တော့ပါဘူး။ ငါလူဖြစ်ခဲ့ လို့ လူတွေစားတဲ့ အစာကို စားရတယ်လို့ပဲ စိတ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကို အန္တာရယ်မပေးရင်တော့ ဘာကောင်မှ မသတ်ပါဘူး။
သဂျီးလည်း .. ၀ိုင်းကန်ထုတ်ခံရတော့မယ့်သဘောရှိတယ်..။
မျက်စိတွေ ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ကြပါခင်ဗျ..။ ဖွင့်ကြပါ။
သာမညတောင်သွားကြရင် သက်သတ်လွတ်ကြွေးနေတာ … လာတဲ့လူထောင်သောင်းအတွက် စားစရိတ်သက်သာအောင်လို့ လို့ပဲ… လွယ်လွယ်ပဲတွေးကြပါ။
ဘာသာရေးနဲ့ ရောမကြိတ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျ..။ တခြားဘာသာဝင်တွေ .. အတွေးအထင်မှားကုန်ပါ့မယ်..။
“ဘုန်းကြီး သက်သတ်လွတ်စားတာ သွားနာသက်သာအောင်လို့ “ဆိုတာနဲ့ သဘောတူတူပါပဲ..။
ဒီအကြောင်း ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေရင် ဆရာကောင်းသမားကောင်းကို ဆည်းကပ်ပီး မေးတော်မူကြပါကုန်။ ပဏ္ဍိတရာမဘုန်းဘုန်းတို.၊ ဦးကောသလ္လဘုန်းဘုန်းတို.၊ ချမ်းမြေ့ဘုန်းဘုန်းတို.၊ ဦးဇ၀နဘုန်းဘုန်းတို. …
အိုး … ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ အများကြီးထပ်ရှိသေးတရ် …
အပေါ်က comment ပိုင်ရှင်တွေထဲမှာလဲ တတ်သိတဲ့သူတွေတွေ.တရ် …
စိတ်ထဲမှာ မသေချာ / မကျေနပ်ရင် သေသေချာချာ ရှင်းလင်းနိင်တဲ့သူဆီမှာ သေချာရှင်းလင်းလိုက် … ဘုန်းဘုန်းတွေဆီမှာဆိုရင် ပိုကောင်း …
အယူမှား / အသိမှား / အမှတ်မှားတရ်ဆိုတာလေ … အပါယ်ကျတဲ့ အမှားဗျ …
မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက်သလို မသိရင် ကြောက်ရကောင်းမှန်းမသိဘူး …
ရှုပ်ထွေးနေရင် မြန်မြန်သာ ရှင်းပါလို. စေတနာနဲ. တိုက်တွန်းအပ်ပါတရ် …
သာမည တောင် ဆရာတော် က သူနေတဲ့ တောင် အစောင့်တွေ ကြမ်းလို့ သတ်သတ်လွတ်စားစေတာလို့ ကြားမိပါတယ်။
နောက်တခု သတိထားမိတာကတော့ အသားစားတဲ့ လူကိုယ်က ထွက်တဲ့ အနံနဲ့ သတ်သတ်လွတ်စားတဲ့ လူကိုယ်က ထွက်တဲ့ အနံ မတူတတ်ပါဘူး။ အသားစားတဲ့ လူရဲ့ ကိုယ်ရနံ ပြင်းတယ်လို့ ပြောတယ်။
သတ်သတ်လွတ်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာ တရား ဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ မတူညီတဲ့ ဘာသာရေး အယူဝါဒတွေ နဲ့ ဆွဲ မညှိသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်လို့ ကိုယ်စားတာ ကိုယ်သဘောကျလို့ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးဖတ်ပြီး တယောက် တပေါက် ပြောနေကြတာကတော့ အတွေးကိုယ်စီ ဖြစ်နေကြယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ကွန်မန်းပေးတဲ့ လူတွေ အားလုံး ရဲ့ စိတ်သဘောကတော့ ဘာသာရေး အယူမတိမ်းစေချင်တဲ့ စိတ်စေတနာနဲ့ ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တချို့သော ကွန်မန်းများ နားလည်မှု လွဲမှားပြီး အခြေအတင်ဖြစ်စေတာလို့ မြင်မိတယ်။
မရှင်းသော အချက်များ မေးမြန်း စူးစမ်းခြင်းသည် ကောင်းပေတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့။ ပုတ်ခတ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး သုံးခဲ့ရင်တော့ အများ သဘောကျနိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပါ။
အားလုံးကတော့ ကံ ကံ ၏ အကျိုး အတိုင်း ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်ခံ။
ဗုဒ္ဓတရားတွေမှာ နားလည် ဥာဏ်မှီသလောက်တော့ အားလုံးက စိတ်ကိုဘဲ ကြည့်ပြီး ကုသိုလ် အကုသိုလ် ဖြစ်ကြောင်းများ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာထားတာပါ။ စားတဲ့ အစာအပေါ် ဆင်ခြင်ပြီးတော့ ဘယ်သူမှ မစားကြပေမဲ့ စားတဲ့ အစားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ အကုသိုလ် ကင်းကင်း စားဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ သတ်သတ်လွတ် ဆိုပြီး ဘာအကောင် ညာ အကောင် ဆိုပြီး ပုံစံတူလုပ်ပြီး သတ်သတ်လွတ်စားနေရင် တဏှာ ပယ်သတ်နိုင်ဖို့ သတ်သတ်လွတ်စားတာနဲ့ မတူဘဲ သတ်သတ်လွတ်ကို တာဝန်အရ စားနေပေမဲ့ တဏှာ မပါယ် သတ်နိုင်ဘဲ စားနေရရင် မစားချင်ဘဲ စားနေရတဲ့ အတွက် ကာယကံ ရှင်မှာ သောကတောင် ပိုလာနိုင်သေးတယ်။ ဈေးထဲက သာ သူများ သတ်ပြီး လာရောင်းတဲ့ အသား ၀ယ်စားလိုက်တာ မှ ပို
ရိပ်သာတွေမှာ အစား စားရင် ၀ါးရင် ၀ါးတယ် မှတ်ပြီး စားကြည့်ပါလား။ ဘာစားစား စည်းချက်ညီညီ ၀ါးရင်းနဲ့ စားတဲ့ အရသာ ဘာမှန်းတောင် သိမှာ မဟုတ်ဘူး။ အသားဘဲ စားမလား အရွက်ဘဲ စားမလား စားတဲ့ အစာ အပေါ် ခန္ဓာ အိမ် မပြက်သုန်းစေဖို့ တာဝန် အရ စားရတယ် ဆိုတဲ့ အသိကလေးနဲ့ စားရင်းနဲ့ စိတ်ပျက်လာမယ်။
တချို့ဆို အဓိဠာန်တွေ ၀င်ပြီး မီးလွတ်စားတဲ့ လူတွေတောင် ရှိသေးတယ်။ သတ်သတ်လွတ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အသားဘဲ ဖြစ်ဖြစ် စားရင်းနဲ့ အမှတ်နဲ့သာ စားရင် စားတဲ့ အစာ ဘာမှ တန်ဖိုး မရှိတော့ပါဘူး။ အစားအတွက် အပိုစဉ်းစားနေစရာတောင် မလိုဘူး သတ်သတ်လွတ်မှ လွတ်ဟုတ်ရဲ့လား မီးလွတ်မှ ဟုတ်ရဲ့လား တွေးစရာတောင် မလိုဘူး။ ကြံကြိတ်စက်ထဲ ထည့်လိုက်တဲ့ ကြံလိုဘဲ ဘယ်ကြံထည့်ထည့် ကြိတ်လိုက်တာဘဲ အရည်ထွက်ရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့.. ၀ါးလို့ ကြေသွားရင် ပြီးရော ဘာဖြစ်ဖြစ် မျက်စိရှေ့ စားလိုက်ရင်ပြီးတာဘဲ။ ဒီပိုစ်နဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ၀င်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အ၀ိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ